Ike eletrik1 Ndị na-emepụta |China Electric power1 Factory & Suppliers
Igwe ọkụ eletrik eletrik CED1000-8
1. Hydraulic electric excavator nwere uru pụrụ iche nke mgbapụta efu, obere mkpọtụ, obere ọrụ & ụgwọ mmezi.
2. ọ na-onwem na ụwa ama ika hydraulic components.
3. Hydraulic excavator nwere ike kwadebere na dual ike ma site diesel engine na electormotor, ọ na-ekere òkè eletrọnịkị excavator pụrụ iche uru na dizel excavator si mobile mma.
Igwe ọkụ eletrik eletrik CED460-8
3. H-ụdị undercarriage na disassembled featured dị ka mfe Ọdịdị na elu torsion-eguzogide, ọzọ kwụsiri ike na a pụrụ ịdabere na.Ụdị ụgbọ ala nke ụdị H nke nwere teknụzụ gbasasịrị dabere n'ụkpụrụ niile maka okporo ụzọ, ụgbọ oloko na njem ụgbọ mmiri.
Igwe ọkụ eletrik eletrik CED760-8
Igwe ọkụ eletrik eletrik CED1260-8
Nke mbụ, onye na-egwupụta ọkụ eletrik hydraulic nwere uru pụrụ iche nke mgbapụta efu, mkpọtụ dị ala, obere ọrụ & ụgwọ mmezi.
Nke abụọ, a kwadebere ya na akụrụngwa hydraulic ama ama nke ụwa.
Nke atọ, hydraulic excavator nwere ike kwadebere ya abụọ ike ma site diesel engine na electormotor, ọ na-ekere òkè pụrụ iche excavator eletrịk uru na dizel excavator si mobile mma.
Igwe ọkụ eletrik eletrik CED260-8
3. X-ụdị Integral undercarriage na-egosipụta dị ka mfe Ọdịdị na elu torsion-eguzogide, ọzọ kwụsiri ike na a pụrụ ịdabere na.
Igwe ihe ngwucha ọkụ abụọ CES490-8
1. The igwe nwere ike kwadebere na ma dizel engine & electric moto, ọ na-ekere òkè nke electric excavator pụrụ iche uru na dizel excavator si mobile mma.Mgbe igwe na-agagharị n'etiti ebe ọrụ dị iche iche ma ọ bụ ọdịda ọkụ eletrik, engine diesel ga-arụ ọrụ dị ka ike unit maka mfe ije, na n'oge ọrụ, electric moto na-arụ ọrụ dị ka ike unit maka efu-emission, obere mkpọtụ, obere ọrụ & mmezi ụgwọ.
Abụọ Ike Hydraulic Excavator CES1280-8
Ụdị n'okpuru carriage nke ụdị H nwere nke a gbasasịrị egosipụtara dị ka usoro dị mfe yana nguzogide torsion dị elu, kwụsie ike na ntụkwasị obi.Ụdị ụgbọ ala nke ụdị H nke nwere teknụzụ gbasasịrị dabere n'ụkpụrụ niile maka okporo ụzọ, ụgbọ oloko na njem ụgbọ mmiri.
Igwe ọkụ eletrik eletrik CED2200-7
H-ụdị undercarriage na disassembled featured dị ka mfe Ọdịdị na elu torsion-eguzogide, ọzọ kwụsie ike na ntụkwasị obi.H-ụdị undercarriage na disassembled technology kwekọrọ na ụkpụrụ niile maka okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè na oké osimiri njem.